Golaha Wasiirada Soomaliya oo manta ka hadleen xaaladda gobolka Gedo. - Iftiin FM
Golaha Wasiirada Soomaliya oo manta ka hadleen xaaladda gobolka Gedo.
by Iftiin FM Reporter December 25, 2020
Waxaa manta shirkii golaha wasiirada soomaliya diiradda lagu saaray ciidamada ay dowladda federaalka Soomaliya gaysay gobolka Gedo, gaar ahaan magaalada Beled-Xaawo ee ku teedsan xuduudda ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya.
Wararka ka soo baxaya shirkaasi ayaa Golaha Wasiirrada ayaa lagu sheegay in ciidamadaas ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga xuduudda, gaar ahaan aagga magaalooyinka Mandheera iyo Beledxaawo oo ay kala joogaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya.
Taliyaha Booliska Somaliland oo afka Furtay kana hadlay Arrin la yaab leh
Golaha Wasiirada ayaa sidoo kale carabka ku dhufteen n aaggaas ay jabhado abaabulan ay weerarro qorshaysan ka geystaan, inkasta oo weli aysan jirin dhacdooyin si madax-banaan loo soo xaqiijiyey oo halkaas ka dhacay, kuwaasi oo ay fuliyeen jabhadda ay sheegtay dowladda.
Wadamada Holand iyo Belgium oo joojiyeen duulimaadyada uga imaanaya dalka UK.
Kulankii maanta ee golaha wasiirrada waxaa shir guddoomiyay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, waxaana intiisa badan diiradda lagu saaray qodobbo ay ka mid yihiin Amniga Doorashooyinka, Amniga Qaranka iyo xuduudaha dalka, Kaalinta IGAD ee xal u helista khilaafka Soomaaliya iyo Kenya, sidoo kale waxaa lagu dhageystay warbixinno la xiriira socdaalkii Ra’iisul Wasaaraha ee deegaanada Puntland iyo Galmudug.
Axmed Madoobe oo ka hadlay qaraxii lala eegaty ciyaartoyda.
Dhalinyaro badan oo xabsiga la dhigay magaalada Siaya.
Dadka badan oo ku dhintay badda Mediterranean-ka .
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo sheegay in dalka ay kajirto Abaar daran
Iftiin FM Reporter July 6, 2022
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo la kulmay Safiirka Sacuudiga
Iftiin FM Reporter July 6, 2022 July 6, 2022
Maxaa loogu hadlay Shirka Madaxweynayeyaasha iyo wakiilada qaar kamid ah waddamada Urur Gobboleedka IGAD
Kenya oo ku dhawaaqday xilliga ay Soomaaliya uu dhoofin doonto Khaadka
Iftiin FM Reporter July 2, 2022 July 2, 2022
Maxkamad 20 sano ku xukuntay sarkal Chief ah oo ka howl gali...
Iftiin FM Reporter July 2, 2022
Shil khasaara geystay oo ka dhacay dalka Kenya
Iftiin FM Reporter July 3, 2022
Musharax Prof. George Wajackoyah oo dharbaxa kala kulmay dhakhaatiirta xoolaha
Badeecadaha cuntada sida hilibka, saliidda cuntada iyo kaluunka oo la filayaa in...
DEG DEG: Chelsea oo uu dhaqaaqday saxiixa xiddig lala xiriiriyay kooxda Man...
Meydka Khadra Daahir oo manta la Aasay & hoggaamiyayaal ka qeyb gashay
Amar la dhul dhigay guddiga doorashooyinka ee dalka
Iftiin FM Reporter July 5, 2022
Kooxaha premier League ee lacagta ugu badan galiyay suuqa kala iibsiga
Madaxweynaha dalka oo kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Cuba